I-Cryogenic ISO Tank-Bulk Gases Izixhobo ze-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>Irhasi yeMizi-mveliso>Izixhobo zeegesi ezininzi
I-teknoloji: ukucoca okuphezulu okuphezulu.
Isicelo: I-LOX, i-LN2, i-LAr, i-LCO2, i-LN2O, ukugcinwa kwe-LNG kunye nokuhamba.
Imigangatho: GB150, EN13530, ASME kunye neminye imigangatho yamazwe aphesheya.
Isatifikethi se-CSI seRejista ye-LIoyd, iSatifikethi se-BV kunye neSatifikethi seCCS.
SinoCleansky Izikhongozeli zangaphakathi ziveliswa ngokwe-GB150, EN13530, ASME kunye neminye imigangatho yamazwe aphesheya, kunye neLioyd's Register CSC Certificate, iSatifikethi se-BV kunye neSatifikethi seCCS, kwaye zinikezela ngolwakhiwo olomeleleyo nolomeleleyo ngenkqubo yokugquma esebenza kakuhle yamaxesha wokubamba.
Iimpahla zisetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa ulwelo oluninzi lwe-cryogenic-nitrogen, oksijini, iargon kunye nekhabhon diokside, i-LNG kunye ne-LN2O-kwihlabathi liphela ngenqanawa, ngololiwe okanye ngendlela. Izikhongozeli zethu ze-ISO ziyafumaneka kuluhlu olubanzi loxinzelelo olusebenzayo ukusuka kwi-0.8-2.4MPa.
Itanki ye-Cryogenic ye-ISO
Isitya sangaphakathi / sangaphandle
I-WH590E / Q345R
Inkcazo: TCSCS-D22C (T75-20FT-8BAR)
I-LOX / LN2 / UMTHETHO
I-SA240 / Q345R
Inkcazo: TCSCS-D22D (T75-20FT-18BAR)
I-LOX / LN2 / LAR / LCO2
I-SA240M / Q345R
I-LOX / LN2 / UMTHETHO / LNG
I-LOX / LN2 / LAR / LN2O
I-LOX / LN2 / UMTHETHO / LNG / LCO2
(kunye nevalve evaliweyo engxamisekileyo)
Isikhongozeli sinenombolo yesikhongozeli kwaye sithumela ngqo.
Izikhongozeli zinesiQinisekiso soVavanyo lweMveliso, umzobo weNdibano yeZizwe eziManyeneyo, isikhongozeli setanki yeNkqubo yeTshathi yeNkqubo, incwadi yomsebenzisi, isatifikethi sokubala samandla kunye nokunye, iSatifikethi se-CSC seQela lesithathu okanye iSatifikethi seCCS
Isalathiso sesatifikethi se-LRS CSC:
Isatifikethi se-LRS CSC
Ungayikhetha njani imveliso elungileyo?
Ii-Pls zibonisa iiparameter zesikhongozeli osifunayo, kubandakanya ukwenziwa komgangatho, uxinzelelo olusebenzayo, ukuzalisa okuphakathi (uhlobo olunye kuphela lwendlela ephakathi okanye eyahlukeneyo), ii-pls zikwabonisa ubungakanani obafunayo. Ngokwesiqhelo sinokubonelela ngoxinzelelo olusebenzayo lwe-8-18bar kulwelo oluqhelekileyo igesi yamashishini, kunye ne-22bar ye-LCO2. Ubungakanani incl 20ft kunye 40ft.
Loluphi uhlobo lokugcina olunokugcinwa?
Ngowuphi umgangatho wokwenziwa kunye neSatifikethi onokuthi usinike?
Umgangatho wokwenziwa kubandakanya i-EN, i-ASME, i-GB, kwaye sikwabonelela ngesatifikethi se-CSC seRejista kunye nesatifikethi seCCS.
Zithini izinto zakho zemveliso?
Singabonelela ngezivalo ze China kunye nezivalo zamanye amazwe. Kwaye siya kubonelela uluhlu lwevalve xa sele kuqinisekisiwe. Ngaphezu koko, impompo ungayikhetha. Sinokubonelela ngempompo kaSmith, impompo yeFrance Cryostar okanye ngaphandle kwempompo, ixabiso lahlukile.